Iskuqeybin - Gpedia, Your Encyclopedia
(Waxaa laga soo toosiyay Iskuqeybin)
Iskuqaybin sidoo kale loo yaqaano Isu-qaybin (ingiriis: divide) astaanta calaamada u ah (÷) iyo (/) waa hab la iskugu qeybiyo lambarada tirada xisaabta. Iskuqaybintu waxay ka mid tahay afarta hab ee aasaaska xisaabta. Si ka duwan iskugeynta, kalagoynta iyo iskudhufashoda ayaa Iskuqaybintu waa kala jebinta lambarada loo kala jebinayo tiro kale. Tusaale ahaan, haddii lambar 8 loo qeybiyo (÷) lambar 2 wadarta iyo jawaabtu waa tirada 8 oo loo kala jebiyay labo meelood taasi oo ah 4 iyo 4. Marka jawaabtu waa 4.
Labo tiro marka la isku qeybiyo wixii ka soo baxa waxaa loo yaqaanaa Wadar.
Marka la isticmaalayo iskuqaybinta waa in la helaa tiro la qeybin karo. Sidaas darteed, lambarka eber (0) kuma jiro xisaabta iskuqaybin ma ahan mid la qeybin karo. Lambarka kow (1) waa ma bedele tirada iskuqeybinta. Tirada la qeybinayo markey ka yartahay tan loo qeybinayo waxaa wadartu noqotaa jajab. Tusaale ahaan, haddii 2 xabo oo moos ah aan u qeybino 4 qof, qof kasta wuxuu helayaa badh (0.5 ama 2/4) moos ah.
Jadwalka Tusaale Iskuqeybin
1 ÷ 1 0.5 0.33 0.25 0.2
2 ÷ 2 1 0.66 0.5 0.4
3 ÷ 3 1.5 1 0.75 0.6
4 ÷ 4 2 1.33 1 0.8
5 ÷ 5 2.5 1.67 1.25 1
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Iskuqaybin&oldid=143201"